‘अपराध बढ्दै ’ : नक्कली नोट मात्र होइन सरकारी कागजात पनि नक्कली – Puleso
‘अपराध बढ्दै ’ : नक्कली नोट मात्र होइन सरकारी कागजात पनि नक्कली
मुलुककाे केन्द्रीय राजधानी काठमाडाैंमै बुधबार ठूलाे परिमाणमा नक्कली नाेट बरामद भयाे । रू एक हजार दरका नक्कली नेपाली नोट ठूलो मात्रामा बरामद गरेको सम्भवतः याे पहिलाे घटना हाे । लामाे समयदेखि संगठित सुन तस्करी, लागू् अाैषध काराेबार र अाेसारपसारजस्ता अापराधिक घटना बढ्दै गएकाे बेला बुधबारकाे घटनाले समाजकाे बढ्दाे अापराधिक चित्र तथा थपिँदाे सुरक्षा चुनाैतीलार्इ उजागर गरेकाे छ ।
तर प्रश्न उठ्छ- उसाेभए ती नक्कली नाेट बजारमा कसरी र किन गए ? यति ठूलाे परिमाणमा नाेट छाप्न किन अनुमति लिइएन ? के यसरी अवैध नक्कली नाेट छाप्न पाइन्छ ? उनीहरूकाे नियतमै प्रश्नचिन्ह लाग्नु अस्वाभाविक हाेइन ।
काठमाडाैंका छापाखानाबाटै नक्कली नाेटकाे खुलेअाम उत्पादन हुने गरेकाे बुधबार बरामद नाेट र साे घटनामा छापाखाना संचालक नै पक्राउ पर्नुले पुष्टि गरिसकेकाे छ । पछिल्लाे समय नक्कली नाेटकाे धन्दा मात्रै हाेइन, सरकारी कागजातलगायत अन्य नक्कली दस्तावेज बनाउने ‘अपराध’ समेत बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएकाे छ। एक दशकअघिदेखि नै नक्कली कागजातकाे धन्दा माैलाएकाे प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
हालसम्म राजधानीबाट नक्कली नोट, सरकारी कागजात, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू बनाउनेलगायतका घटनामा संलग्न एक सयजना भन्दा बढी पक्राउ परिसकेको समेत महानगरीय प्रहरी परिसरले जनाएकाे छ । यसरी संगठित तवरमै नक्कली कागजात एवं दस्तावेज बनाउने स्थानहरू धेरै भएको आशंका गरेको प्रहरीले छापाखानाहरूमा निगरानी बढाएको जनाएको छ । यद्यपि नागरिकतादेखि पासपाेर्टसम्म र जग्गाधनी पूर्जादेखि शैक्षिक सर्टिफिकेटसम्मकाे नक्कली धन्धा बढ्दै गए पनि यसप्रकारका घटनामा ठूलाे अप्रेसन हुन सकेकाे देखिन्न ।
लूटका निर्माताकै ‘लूटधन्दा’
झण्डै ६ वर्षअघि रिलिज भएकाे ‘लूट’ फिल्मले नेपाली समाजमा माैलाएकाे अापराधिक गतिविधिले कसरी सुरक्षा चुनाैती थपेकाे छ भन्ने देखाइएकाे थियाे । त्यस समय निकै तहल्का मच्चाएकाे लूटले अापराधिक टेक्निककाे पाटाे मात्रै खाेलेन धेरै पात्रलार्इ फिल्म जगतमा हिट पनि बनायाे ।
तर, बुधबार फिल्म ‘लूट’कै निर्माता भनिएका माधव वाग्लेसहित ६ जनालार्इ ठूलाे परिमाणका नक्कली नाेटसहित प्रहरीले समातेपछि लूटकाे अर्काे टेक्निककाे पाटाे छर्लंग भएकाे छ । फिल्मी शैलीमै नक्कली धन्धामा लूटकै निर्माता संलग्न रहेकाे भेटियाे । फिल्ममार्फत समाजकाे चित्र उदांगाे पार्ने र सचेतनाका लागि सन्देश दिनुपर्ने मान्छे अाफै ‘लूटधन्धा’मा समातिएपछि यसले समाजकाे मनाेविज्ञान कता माेड्ला ? गम्भीर प्रश्न सृजना भएकाे छ ।
बुधबार पक्राउ पर्नेमा वाग्लेसहित महेन्द्र बोगटी, सुजित तामाङ, सुजन तामाङलगायत रहेका छन् । २ करोड ६० लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरका नक्कली नोट उनीहरूबाट बरामद भएको छ । यद्यपि उनीहरूले चाहिँ ‘फिल्मकाे सुटिङ’का लागि ती नाेट छापेकाे दाबी गरेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ- उसाेभए ती नक्कली नाेट बजारमा कसरी र किन गए ? यति ठूलाे परिमाणमा नाेट छाप्न किन अनुमति लिइएन ? के यसरी अवैध नक्कली नाेट छाप्न पाइन्छ ? उनीहरूकाे नियतमै प्रश्नचिन्ह लाग्नु अस्वाभाविक हाेइन ।
उपत्यकाका गोंगबु, लुभु र बागबजारस्थित छापाखानाबाटै बरामद गरिएको भनिएका ती नाेट रेस्टुराँ र वेश्यालयकाे बिल तिर्नमा प्रयाेग भएकाे पाइएकाे छ । एउटा रेस्टुराँमा खाजा खाएपछि ग्राहकले दिएको १ हजारका तीनवटा नोट एउटै नम्बरका भेटिएपछि प्रहरीसम्म उुजुरी पुगेकाे बताइन्छ । उजुरीपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडाैंले सुरु गरेको खोजतलासमा नेपाली १ हजार रूपैयाँका नोट छाप्ने छापाखाना नै फेला परेको बताएकाे छ ।
पछिल्लाे समय दण्डहीनता माैलाएकाे छ, राजनीतिक पावर तथा संरक्षणकाे अाडमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र पुनः अपराध कर्ममै फर्कने प्रवृत्ति समेत बढेकाे छ ।
ठूलाे परिमाणकाे नक्कली रुपैयाँ र साे छाप्नका लागि तयार पारिएका ‘प्लेट’सहित ६ जनालार्इ प्रहरीले पक्राउ गरेपछि यस प्रकारका अापराधिक घटनामा संगठित गिराेह नै लागिपरेकाे छर्लंग भएकाे छ । यसरी छापिएका नक्कली नोट होटल, रेष्टुरेन्टको बिल तिर्ने, यौनकर्मीलाई दिने, जुवा खेल्ने, लागू औषध किन्नमा प्रयोग गर्नेलगायतका कार्यमा लगाउने गरेकाे प्रहरीले बताएकाे छ ।
बढ्दै नक्कली कागजातकाे धन्दा
राजधानीका अधिकांश छापाखाना र स्टाम्प हाउसमा पछिल्लाे समय नक्कली कागजात बनाउने, नक्कली छाप तथा लेटरप्याड बनाउने ‘अपराध’ समेत बढ्दै गएको अनुसन्धानबाट खुल्न अाएकाे छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डिएसपी मोहनकुमार थापाले सरकारी कागजातहरू, विवाह दर्ता, जन्मदर्ताका प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताका कागजात सबै नक्कली बनाउने गरेकाे फेला परेकाे बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पनि धेरै नक्कली कागजातहरू पेश गर्ने गरेको उनकाे भनाइ छ । यसप्रकारका धन्धामा दिन-प्रतिदिन वृद्धि भइरहेकाे उनी स्वीकार्छन् ।
यसरी नक्कली कागजात बनाउने र पेश गर्ने धेरैलार्इ पक्राउ गरिसकेकाे महानगरीय प्रहरीकाे दाबी भए तापनि यस्ता घटनामा किन कमी अाइरहेकाे छैन त ? प्रश्न गम्भीर छ । पछिल्लाे समय दण्डहीनता माैलाएकाे छ, राजनीतिक पावर तथा संरक्षणकाे अाडमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र पुनः अपराध कर्ममै फर्कने प्रवृत्ति समेत बढेकाे छ ।
पछिल्लाे समय ठूलाे परिमाणमा सुन तस्करी भएकाे घटना र साे घटनामा अपराध अनुसन्धान प्रहरी उच्च अधिकारीहरूकै मिलेमताे देखिन अाएपछि यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएकाे छ । साे घटनाले सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानकाे जिम्मेवारी पाएकाे नेपाल प्रहरीप्रति जनताकाे विश्वास घट्दै गएकाे देखिन्छ ।
सुन तस्करी प्रकरण सेलाउन नपाउँदै ठूलाे परिमाणमा नक्कली नाेट बरामद हुनुले अर्काे प्रश्न सृजना गरेकाे छ । सरकारी कागजात, जग्गाधनी पूर्जालगायत प्रमाणपत्रहरू समेत नक्कली बनाएर जालसाजीका घटना बढिरहेकै बेला नक्कली नाेट नै छाप्ने छापाखाना भेटिएपछि प्रहरी झस्किनु असामान्य पनि हाेइन । यस घटनाले प्रहरीमाथि झन् ‘चुनाैती’ थपिदिएकाे छ ।
अढार्इ कराेड नक्कली नाेट छपाइमा हाल दुइटा छापाखानाकाे संलग्नता देखिए पनि यस्ता नक्कली नोट र नक्कली कागजात छाप्ने अन्य छापाखाना पनि हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले खोजतलास बढाएकाे बताइन्छ ।
प्रवक्ता थापाका अनुसार, नक्कली नोट, नक्कली प्रमाणपत्र र अन्य सरकारी दस्तावेज बनाउने छापाखानाहरू धेरै रहेकाे सुचना प्रहरीसम्म पुग्ने गरेकाे छ । तथापि भरपर्दाे सूचना र प्रमाणकाे अभावमा प्रहरीले ‘अप्रेसन’ चलाउन सकेकाे छैन । पछिल्लाे समय प्रहरीले संवेदनशील भएर ‘खोजतलास र अनुसन्धान’ गरिरहेकाे जनाएकाे छ ।
प्रविधिकाे अभावमा अनुसन्धान फितलाे
समाजमा अापराधिक गिराेहका नयाँ-नयाँ ‘टेक्निक’ विकसित भइसक्दा पनि नेपाल प्रहरीचाहिँ अाधुनिक प्रविधिकाे पहुँचमा अझै पुग्न सकेकाे छैन । पछिल्लाे समय विश्वविद्यालयकै प्रमाणपत्र, संवेदनशील सरकारी कागजातहरू नक्कली बनाउने र विदेशसम्म पठाउने धन्धा माैलाएकाे छ । यस्ता घटनामा बेलाबेला उजुरी पर्ने समेत गरेका छन्, तर उजुरीकै आधारमा विभिन्न कागजात र दस्तावेज भेटिएपछि नक्कली हुन् या होइनन् भन्ने छुट्याउन प्रहरीलार्इ समस्या हुने गरेकाे बताइन्छ ।
यस्ता घटनामा अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन तथा नक्कली/सक्कली प्रमाणित गर्न अावश्यक प्रविधिको आवश्यकता रहेको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउने गर्छन् । साेकाे अभावमा सबै घटनामा अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसक्ने र अावश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा वा ढिलाे गर्दा अपराधी उम्किन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।